မက္ကဆီကို အပန်းဖြေ မြို့ ဆိပ်ကမ်းတွင် ရေယာဉ်ဖောက်ခွဲခံရမှုမှာ ပြည်တွင်း မူးယစ်ဂိုဏ်းသားများ - Yangon Media Group
မက္ကဆီကိုစီးတီး၊ မတ် ၁၂
မက္ကဆီကိုအပန်းဖြေမြို့ ကလေး Playa del Carmen တွင် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းက ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ခရီးသွားအပန်း ဖြေရေယာဉ်ပေါ်ရှိ လူ ၂၄ ဦးခန့် ဒဏ်ရာများရရှိသွားခဲ့ရာ ယင်းသည် အကြမ်းဖက်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မဟုတ်ကြောင်း မက္ကဆီကိုရှေ့နေချုပ်ရုံးက မတ် ၁၁ ရက် ရက်စွဲဖြင့် သတင်းထုတ် ပြန်ချက်တစ်ရပ်အရ မတ် ၁၂ ရက်က သိရှိရသည်။
ယင်းပေါက်ကွဲမှုသည် ဆိပ်ခံ ဗောတံတားတွင် ဆိုက်ကပ်ထားစဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း မူးယစ်ဂိုဏ်းသားများက လက်လုပ်ဗုံးများတပ်ဆင်ကာ နိုင်ငံခြားခရီးသွားများမလာရဲစေရန် ဖောက်ခွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်ဟု ခေတ္တရှေ့နေချုပ်ဖြစ်သူ အယ်လ်ဘာတိုဘီအီးယာ့(စ်)ဘာထရန်က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။
”ပြည်တွင်းမူးယစ်ဆေးဝါး ဂိုဏ်းသားများက အစိုးရထိုးစစ်ကို မခံနိုင်လို့ လစ်ဟာနေပြီး လုံခြုံရေး အားနည်းနေတဲ့ခရီးသွားကဏ္ဍကို အနှောင့်အယှက်ပေးတယ်။ အ မေရိကန်နိုင်ငံသား ခရီးသွားများ အပါအဝင်လူ ၂၁ ဦးဒဏ်ရာများ ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။ အမှုကိုဖော်ထုတ်ပြီး ရုံးတင်တရားစွဲဆိုနိုင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်”ဟု ဆက်လက် ပြောဆိုလိုက်သည်။ သို့သော် အမှုဖော် ထုတ်ပုံအသေးစိတ်အခြင်းအရာနှင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဂိုဏ်းအားထုတ်ဖော်မပြောဆိုထားခဲ့ချေ။ ယင်းဖောက်ခွဲခံရသော ရေယာဉ်သည် ယာဉ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဟောင်းဖြစ်သူ ရောဘတ်အိုဘော့(ဂ်ျ)၏မိသားစုတစ်ဦးဖြစ်သူ ဘာကိုစ်ကာရစ်ပိုင်ဆိုင်သောယာဉ်ဖြစ်သည်။
အကြမ်းဖက်မှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း အပေါ် လူ့အခွင့်အရေး ခေါင်းစဉ်အောက် ရောထွေး မသုံးသပ်??
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတွင် ရထားက ထရပ်ကားကို ဝင်တိုက်မှုကြောင့် လူ ၁၈ ဦးသေဆုံး၊ ၂၅၄ ဦး ဒဏ်ရာရ
ဝန်ကြီးချုပ် ကိုယ်တိုင် ကွမ်းစားနေခြင်းသည် နမူနာကောင်း မဟုတ်ဟု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ဆ??
မိုင်းဖုန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဥာဏသံဝရ၏ သက်တော် (၅၆) နှစ်ပြည့် ဝိဇာတမွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အလှူရ
ဗင်နီဇွဲလား ဆန္ဒပြပွဲများအတွင်း ငါးဦးသေဆုံးပြီး ၂၃၃ ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း ရှေ့နေချုပ်ေ?